Yakha Izikweletu Zakho Zobumbano - Inombolo yeDun & Bradstreet & DUNS
I-D&B kungenye yezindlela ezilula zokuvula iphrofayili yesikweletu sebhizinisi. Lokhu kuqala ngokuthola inombolo ye-DUNS. Sihamba kuyo yonke inqubo futhi sihlinzeka lonke lolu lwazi oludingayo ukuze wazi kuyo yonke le nqubo yenhlangano yokwakha izikweletu. Kubaluleke kakhulu ukuthi ufunde futhi uqonde lesi sinyathelo esibalulekile futhi uthumele inkampani yakho kahle. Lokhu kungenziwa mahhala, noma kunjalo ungakhokhiswa ukuthi ushintshe imininingwane, ngakho-ke kubalulekile ukuthi unake imininingwane.
Ukuthola inombolo yakho ye-DUNS ™
Kunezindlela ezimbili zokuthola inombolo yakho ye-DUNS ™ kusuka ku-D&B. Ungaba nensizakalo EMAHHALA kusuka ku-D&B, noma ukhethe ukuthi inombolo yakho inikezwe ngosuku olufanayo lwebhizinisi ku- $ 299 kuya ku- $ 799. Khumbula ukuthi yonke inqubo yokwakhiwa kwezikweletu izokuthatha izinyanga ezimbalwa, ngakho-ke ukukhokha i-D&B okwamanje, ngeke kwenze izinto zenzeke ngokushesha esithombeni esikhulu. Kusasele ezinye izinhlaka ezimbili ezizodingidwa ngemuva kwe-D&B, i-Experian ne-Equifax.
Inombolo YAMAHHALA SAMAHHALA - Thola inombolo ye-DUNS ™ Mahhala. Le nqubo izothatha cishe izinsuku ezingama-60. Uma ukhetha le sevisi yamahhala, uma usuqedile inqubo yefomu, uzonikezwa enye indlela yokukhokhela ukucubungula okuphelelwe yisikhathi. Unikezwe inketho yokuba nenombolo yakho ezinsukwini zebhizinisi ze5 zama- $ 49 noma ngezinsuku zebhizinisi ze-30 ngaphandle kwenkokhiso. Futhi, ukuba nenombolo yakho ye-D&B akusheshisi inqubo yonke yokwakha isikweletu sebhizinisi, ngakho-ke kukuwe.
Iphrofayili Yesikweletu ye-D&B - Ungakwazi Dala iphrofayili yesikweletu ye-D&B njengenkonzo yephakeji lapho uzothola khona inombolo yakho ye-DUNS ™ nephrofayili idalwe ngosuku olufanayo.
Ngensizakalo yamahhala, usazoqhubeka nemiphumela efanayo. Uzotshelwa ukuthi uma ungakhokhelanga ngenkonzo yephrofayela ye-D & B yokuthi i-akhawunti yakho ayisebenzi. Lokhu kulungile, noma kunjalo uma usunomthengisi oyedwa noma umsebenzi wombiko wokukweleta, iphrofayela yakho idaliwe futhi i-akhawunti icushiwe ngokushesha.
Lapho ukhetha ukuba nenombolo yakho ye-DUNS ™ yenzelwe mahhala, uzoxhumana ne-D&B ukuze ukwazi ukukhokhela iphrofayela yakho. Uzotshelwa ukuthi udinga iphrofayili evela kwa-D&B ukuze uthole isikweletu senkampani futhi kufanele ukhokhele insizakalo ukuze wenze lokho kwenzeke, esivele sikuchazile akulona iqiniso. Uthola inombolo yakho ye-DUNS ™ mahhala, ungadonsa owakho umbiko futhi uma uthola umbiko wabathengisi noma wokubolekayo, iphrofayili yakho idalwa futhi ivuselelwe ngokushesha.
Uma uthola inkampani yakho ngemuva kokwenza usesho lwe-D&B, ungabheka ukubona ukuthi i-akhawunti yakho icushiwe ngokuthenga Umbiko Wephrofayili Yenkampani, nge- $ 12.99. Uma inkampani yakho ingenayo iphrofayli, ngeke idalelwe umbiko futhi ikhadi lakho lesikweletu ngeke likhokhiswe.
Uma usuvele uqinisekisile ukuthi iphrofayela yakho iyasebenza, ungathola ikhophi lesikweletu sakho se-D&B umbiko mahhala noma ngemali ekhokhwayo
Kukalwe futhi Okungalinganiswanga DUNS Izinombolo
Uma ukhuluma noDun kanye noBradstreet, uzotshelwa ukuthi inombolo yamahhala ye-DUNS ™ isibonakaliso esingenakulinganiswa, ongeke ukwazi ukusisebenzisa ukwakha isikweletu sebhizinisi. Uzobuye utshelwe ukuthi uma ufuna inombolo ekaliwe ongayisebenzisa ukuthuthukisa isikweletu sebhizinisi, kufanele udlule kwinqubo yabo yokuqinisekisa ngentengo yanoma yikuphi phakathi kwe- $ 329 ne- $ 799. Ungaqhathanisa amazinga abo womsebenzi amabili lapha:
Umakhi Wezikweletu we-DNB - Lolu luhlelo lokwakha isikweletu olungu- $ 329 kusuka ku-DNB.
Umakhi Wezikweletu we-DNB Lolu wuhlelo lokwakha isikweletu olungu- $ 599 kusuka ku-DNB.
Okufanele Ukwazi Nge-DNB
Ukusekelwa kwe-DNB kwakhiwa abamele abathengisi bekhomishini. Uzotshelwa ukuthi awukwazi ukwakha isikweletu ngenombolo ye-DUNS ngaphandle kokuthi uthenga uhlelo lokwakha isikweletu bese wenza inqubo yokuqinisekisa. Lokhu AKUYONA IQINISO. Inombolo yakho ye-DUNS yinombolo yakho futhi uma unezinkomba zokuhweba nezinhlangano zokubika, iphrofayela yakho izokhula.
Uzotshelwa okulandelayo: Inombolo yamahhala ye-DUNS ikuhlu no-D&B, kepha hhayi ukubhaliswa okuphelele. Akufanelekeli ukuthola amaphuzu wesikweletu aqageli noma izilinganiso zesikweletu. Uzotshelwa ngezinhlelo ezimbili zokwakha izikweletu ezibalwe ngenhla nangelinye izinga lenkonzo ye-DNB yi- $ 799 lapho ungangeza khona inani elingenamkhawulo leenkomba zebhizinisi lakho. Lokhu akudingekile ukwakha isikweletu sebhizinisi noma ukudala iphrofayili yakho yesikweletu yenkampani. Thola inombolo yakho kwa-DNB bese uqhubeka nokwakha isikweletu sebhizinisi lakho.
>> Qhubekela Esinyakazweni Esilandelayo Isikweletu Sokwakha - Inkampani >>